Global Voices teny Malagasy » Malezia: Bilaogera iray hafa nahazo tsikera · Global Voices teny Malagasy » Print
Malezia: Bilaogera iray hafa nahazo tsikera
Voadika ny 09 Marsa 2019 4:16 GMT 1	 · Mpanoratra Daniel Chandranayagam Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Malezia, Mediam-bahoaka
Nitsikera ilay bilaogera, Joseph Tawie noho ny famoahan-dahatsoratra tao amin'ny bilaogin'ity farany ny Lehiben'ny Minisitra Lefitra, Alfred Jabu Numpang, avy ao amin'ny fanjakana Maleziana ao Sarawak. Niampanga ireo mpitondra fanjakana tao Sarawak tamin'ny famafana ireo fanamelohana fanararaotana ara-nofo nihatra tamin'ny vehivavin'i Penan tao amin'ny bilaoginy antsoina hoe The Broken Shield  i Tawie, mpanoratra an-tserasera miasa tena sady bilaogera.
Nandrisika ny manampahefana mba hanadihady ny fiampangàna ny fanararaotana ara-nofo natao tamin'ireo vehivavy Penan , ao amin'ny faritr'i Baram ao Sarawak ny bilaogin-dahatsoratra iray. Araka ny tati-baovao  , nanamafy ny tsy fahafalian'i Jabu tamin'i Tawie ny minisitry ny kabinetra tsy nitonona anarana tany an-toerana. Naneho ny hatezerany tamin'ny mpanao gazety iray ihany koa i Jabu.
Nanasongadina ny fiampangàna ireo mpiasa tao amin'ny orinasa mpitrandraka hazo, Samling sy Interhill, izay nanararaotra ireo vehivavy Penan ara-nofo ny lahatsoratra navoakan'i Tawie, mitondra ny lohateny hoe ‘Ny raharahan'ny fanolanana ny Penan: Aleo handresy ny marina’. Voalaza fa efa nanao ny asa ratsiny efa ho am-polo taonany ireo mpiasa ireo.
Vondrom-poko izay miaina any anaty ala any amin'ny faritra Avaratr'i Borneo ny Penan. Ankoatra ireo fanararaotana ara-nofo niampangana ireo mpiasan'ny orinasa mpitrandraka hazo dia tohina tamin'ny fanapotehana ny ala izay honenan'izy ireo tamin'ny fanapahana hazo ihany koa ireo Penan, ka maro be ireo foko no nanao sakana ny Interhill mba tsy ahafahan'izy ireo miditra ao anaty ala.
Nilaza i Tawie fa nijery ara-potoana ny momba ny zava-nitranga nahazo ireo mpianatra tovovavy Penan noho ny fanolanana sy ny fanararaotana voalaza fa nataon'ireo mpitrandraka hazo ny mpiasa avy ao amin'ny Minisiteran'ny Fampandrosoana ny Vehivavy, ny Fianakaviana ary ny Vondrom-piarahamonina .
Timely, because state leaders in particular (Chief Minister) Abdul Taib Mahmud, (Deputy Chief Minister) George Chan and (Deputy Chief Minister) Alfred Jabu have not only accused newspapers of deliberately publishing false news, but have also accused them as saboteurs. ‘Saboteurs’ is a very strong word indeed.
Ara-potoana, satria tsy niampanga fotsiny ny gazety ho namoaka vaovao diso, fa niampanga azy ireo ihany koa ho mpisompatra mpitondra fanjakana ireo (Lehiben'ny Minisitra) Abdul Taib Mahmud, (Lehiben'ny Minisitra Lefitra) George Chan sy Alfred Jabu. Efa teny mavesatra rahateo ihany koa ny hoe ‘mpisompatra’.
Hoy izy hoe, “hisy vokany mahasadaikatra eo amin'ny mpitondra (fanjakana) antsika ny marina raha misy ny fahamarinana.”
Mbola nisokatra sy nandeha ny bilaogin'i Tawie, na dia tsy mbola nisy aza ny fanambarana momba ny fepetra raisin'ny manampahefana raha hisy izany, momba azy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/03/09/135870/
 The Broken Shield: http://thebrokenshield.blogspot.com/
 fanararaotana ara-nofo natao tamin'ireo vehivavy Penan: http://www.brunomanser.org/en/news/?show=118